Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Lufthansa manidina olona 76,000 avy amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt amin'ny faran'ny herinandro fialan-tsasatra voalohany
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Fanombohana ny fialan-tsasatry ny fahavaratra any Hesse: Manoro hevitra i Lufthansa ho tonga amin'ny seranam-piaramanidina amin'ny fotoana mety.
Miaraka amin'ny toerana 192, ny orinasam-pitaterana an'habakabaka dia manome toerana maro sidina kokoa avy any Frankfurt amin'ity fahavaratra ity.
Lufthansa dia manolotra fifandraisana mihoatra ny 1,800 isan-kerinandro, 55 isan-jaton'ny fifandraisana hatramin'ny andron'i Corona.
Ny foto-kevitra momba ny fiarovana ny fahadiovana feno, izay natolotry ny Vondrona Lufthansa tamin'ny fiandohan'ny areti-mandringana, dia manohy miantoka ny sidina azo antoka.
Fanombohana ny fialan-tsasatra any Hesse: olona 76,000 no miala sasatra miaraka amin'ny fialan-tsasatra Lufthansa avy amin'ny Seranam-piaramanidina Frankfurt amin'ny faran'ny herinandro fialantsasatra voalohany. Miaraka amin'ny toerana 192, ny zotram-piaramanidina dia manome toerana fivezivezena bebe kokoa avy any Frankfurt noho ny amin'ny fahavaratry ny taona 2019 ary, miaraka amin'ny fifandraisana maherin'ny 1,800 isan-kerinandro, 55 isan-jaton'ny fifandraisana tamin'ny vanim-potoana talohan'ny Corona, miaraka amina fironana miakatra. Mandritra izany fotoana izany, fanjakana maro no manohy mitaky antontan-taratasy fanampiny toy ny mari-pankasitrahana na fanaovana vaksiny. Noho io antony io dia nanoro hevitra i Lufthansa ny tokony hahitan'ny mpandeha izany vaovao mialoha sy hahatongavany ara-potoana amin'ny seranam-piaramanidina.
Ireo izay manahy ny tsy fananana mari-pankasitrahana mety amin'ny dia dia azon'izy ireo atao ny manamarina azy ireo avy amin'ny Ivotoerana Serivisy Lufthansa momba ny sidina voafantina hatramin'ny 72 ora alohan'ny hiaingany. Anisan'izany ny porofon'ny fitsapana, velona amin'ny aretina COVID-19 sy vaksiny. Ny fanamafisana ny fisoratana anarana nomerika dia azo zahana ihany koa. Io dia miantoka mialoha fa misy ireo antontan-taratasy ilaina. Manoro hevitra i Lufthansa ny hanohizan'ny vahininy ireo mari-pankasitrahana vita pirinty tany am-piandohana, ankoatry ny porofo niomerika.
Iza amin'ireo antontan-taratasy no ilaina ary aiza no ahafahana manao fitsapana COVID-19 ho an'ny dia miverina dia hita ao amin'ny tranokala Lufthansa. Ho an'ny fitsangatsanganana any Alemana, ny fitsapana ny antigen amin'ny fampiasana ny fomba fanaovana video-ident dia ekena ankehitriny ary azo vidiana amin'ny Internet ihany koa.
Ho fitsangatsanganana an-tanety, dia nanoro hevitra i Lufthansa fa hampiasa serivisy an-tserasera marobe amin'ny fisavana sy fidirana entana. Ao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt, ny mpandeha dia afaka manamarina ny entany tsy andoavam-bola any amin'ny fiara fitaterana misy manomboka izao hatramin'ny faran'ny fialan-tsasatra. Azo atao tsara izany manomboka amin'ny 23 ka hatramin'ny roa ora alohan'ny fiainganana, raha ilaina koa ampiarahina mivantana amin'ny fitsapana COVID amin'ny drive-through.